VISION MADAGASCAR: Mampandroso ny firenena Malagasy ny fisokafana amin’izao tontolo izao. · déliremadagascar
Araka ny fanambaran’ny Filoham-pirenena Malagasy, misokatra amin’ny firenena manerana an’izao tontolo izao i Madagasikara. Tanjona amin’izany ny fiaraha-mientana amin’ny fampandrosoana ny firenena Malagasy. Mbola nohamafisiny ny Filoha, Hery RAJAONARIMAMPIANINA ihany izany nandritra ny lanonana fankalazana ny faha-57 ny fahaleovantena Malagasy, natao teny Iavoloha.
Mitovy fomba fijery amin’ny Filoham-pirenena ny mpandraharaha sady Filoha Tale Jeneralin’ny VIMA, Zouzar BOUKA. Nambaran’ity farany fa fomba iray ahafahana ny mampandroso an’i Madagasikara ny fisokafana amin’ireo mpamatsy vola avy amin’ny vazan-tany efatra.
Anisany nanatrika ny lanonana fankalazana ny fetim-pirenena ity tomponandraikitra voalohany ny orinasa « Vision Madagascar » ity.